Ingqungquthela Yomhlaba Wonke Yokuphefumula 2021 - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
Ikhaya>Izenzakalo>Ingqungquthela Yomhlaba Wonke Yokuphefumula 2021
Ingqungquthela Yomhlaba Wonke Yokuphefumula 2021Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-10-06T16:32:58+02:00
Ingqungquthela Yomhlaba Wonke Yokuphefumula ka-2021 yabanjwa cishe ngoLwesine, Septhemba 9, 2021. Onyakeni owodwa futhi, besifuna ukuhlinzeka ngenkundla yezinhlangano zeziguli ukuthi ziphakamise izwi lazo ngezinkinga eziphuthumayo, zabelane ngemikhuba emihle, futhi zihlangane nezinhlangano zokukhuthaza ukuphefumula.
13: 00h CEST: Isikhathi sokungenisa noMongameli weGAAPP, uTonya Winders kusuka
14:00 CEST: Izikhathi zokuphumula zezifo ezintathu zokuphefumula zithi: i-asthma, i-COPD, isifo esingajwayelekile. Lezi zikhathi zizoletha izinhlangano zokukhuthaza ukuphefumula ndawonye ukuze zabelane ngemikhuba emihle futhi zisebenzise amazwi ahlanganyelwe esifweni ngasinye sokuphefumula.
Ngesikhathi somhlangano omkhulu iTonya Winders, uMongameli weGAAPP, wethule le nhlangano, ukukhula kwayo kubasebenzi, izinhlangano ezingamalungu, kanye namandla kusukela ngo-2020. Siphinde sethula iGlobal Partners yethu (WAO, FIRS, GlobalSkin, WHO-GARD, GINA & GOLD) kanye imifelandawonye yesikhathi esizayo.
Ukuvuselelwa okufushane nesifinyezo kwethulwe ku:
Umthwalo nokusabalala kwezifo zokuphefumula
I-GAAPP iphinde yethule amaphrojekthi alandelayo nempumelelo efanele zonke izinhlangano ezisebenza emkhakheni wokuphefumula:
Uhlobo lwesibili lwe-Patient Navigator
Ukubhalisa kwe-SecureDerm-AD; COVID-19 irejista; Ukubhaliswa kwe-Asthma360 & COPD360
Uhlelo lwe-Precision Severe Asthma-Break Over-Reliance kanye ne-International Respiratory Council
Ukuvuselelwa Kwewebhusayithi Okuqhubekayo ne-SEO
Izinsuku Zokuqwashisa Umhlaba-I-Asthma, i-AD, i-COPD, usuku Lung, i-Urticaria
Izincwadi zokubuyekeza kontanga
Umhlangano weSayensi & Ingqungquthela ye-GRS & LATAM
Chaza Umkhankaso Wakho Wesifuba Somoya
Ingqungquthela Yokunakekelwa Kwamalungelo Okuphefumula & Ithuluzi Lobumeli
UMTHETHO kumkhankaso we-COPD
I-EoE Ulwazi Exchange
Ithuluzi Lokwenza Izinqumo nge-Urticaria
Inhlangano Yomhlaba Wonke Yokuphefumula
Ukwethulwa kwamaphrojekthi kwakamuva kwethulwe ngokuningiliziwe:
Imihlahlandlela Yokunika Amandla Isiguli yama-COPD PAtients
Amavidiyo weSayensi Opopayi kuZilingo Zemitholampilo kanye Nokwenza Izinqumo Kwabiwe
Bekufanele sihloniphe ukubala nama-Testimonials nezethulo ezivela ku:
U-Elina Ikävalko kusuka eFinland. U-Elina, oneminyaka engama-33 ubudala yisiguli se-Sty 3 emphysema esitholwe sine-COPD ebucayi.
UDkt Sarah Rylance, UMedial Officer eMnyangweni Wezokuphatha we-NCD weNdlunkulu ye-WHO, owethule inqubomgomo ye-WHO yezifo zokuphefumula.
I-GAAPP yethule i-Look Ahead of 2022:
Amaphrojekthi Wocwaningo namaRejista
Izinsuku Zokuqwashisa Umhlaba 2022
I-LSE SA Audit Publication & Policy Priorities Priorities
Ukuthuthukiswa Kwedijithali Yezempilo / Telehealth
Isikhungo Sezinsiza Sikahulumeni Sezifo — Isifuba Somoya, i-COPD, COVID, I-TB, Izifo Ezingajwayelekile, njll.
Ama-KPI ukufeza izinhloso ze-SP:
Ukwakha Amandla Enhlangano
Ukugqugquzela (Inqubomgomo Yezempilo)
Siphothule iseshini enkulu ngokwethula ukuthi iZinhlangano Ezingamalungu zingazibandakanya kanjani nezinhlelo zeGAAPP nokuthi singasiza kanjani ukukhula kwenhlangano futhi sisekele imizamo yeLungu ngalinye.
Izitatimende Zokumelwa Ezikhishwe Kumaqembu Okusebenza:
Ukwaziswa: Sidinga ukukhulisa ukuqwashisa ngazo zonke izinto eziyingozi, sifike kubantu abasha, futhi siqiniseke ukuthi sihlanganyela ezingxoxweni ezimayelana nomoya ohlanzekile.
Imfundo Yabachwepheshe Bokunakekelwa Kwezempilo: Kufanele siqiniseke ukuthi i-HCP ingafinyelela kumhlahlandlela, izinto zokwakha, kanye nolwazi ngendlela efingqiwe nelula. Qiniseka ukuthi ukuhumusha kuhlala kutholakala.
Ukuguqulwa Kwenqubomgomo: Lezo zinto ezinobungozi kumele zaziswe kubenzi bezinqubomgomo futhi siqiniseke ukuthi sihlala sihlanganyela eqenjini lababambiqhaza abaningi nganoma yisiphi isinyathelo, umkhankaso, noma umcimbi.
Iqembu Lesifuba Somoya
Ukwaziswa: Isifuba somoya yisifo esingelapheki esingadluli. Iziguli ezingaphezu kwesigamu se-asthma azilawulwa kahle futhi ayikho indlela elingana ngayo yonke indlela ngenxa ye-asthma. Sebenzisa i-PULSAR njengamafulegi abomvu ukuqala ukubuyekeza i-asthma.
Imfundo Yabachwepheshe Bokunakekelwa Kwezempilo: Chaza umehluko phakathi kwe-OCS, ICS ne-anabolic steroids. Chaza umthwalo okhulayo we-steroids kufaka phakathi ama-comorbidities nemizila ehlukene yokuphatha.
Ukuguqulwa Kwenqubomgomo: Ukufinyelela ekwelashweni okulungile kwesiguli esifanele ngesikhathi esifanele ngezithiyo ezimbalwa kakhulu. Qinisekisa ukuthi i-LMIC iyakwazi ukufinyelela emithini ebalulekile.
Iqembu Elingajwayelekile Lezifo:
Ukwaziswa: Izifo ezingandile azivamile. Kunezifo ezingavamile ezingaphezu kweziyi-7000 kanti inani labantu abathintekile emhlabeni jikelele liphezulu.
Imfundo Yabachwepheshe Bokunakekelwa Kwezempilo: Impilo yomphakathi ibaluleke kakhulu emnothweni nasemphakathini, ngakho Ochwepheshe Bokunakekelwa Kwezempilo kufanele basize iziguli ukuthi zinikezwe ukufinyelela kokwelashwa ezikudingayo.
Ukuguqulwa Kwenqubomgomo: Ucwaningo olwengeziwe lubalulekile emkhakheni Wezifo Ezingavamile. Izidingo ezingagcwaliseki zeziguli emiphakathini eyahlukene zidinga ukukhonjwa futhi zilungiswe.
Uma ungakwazanga ukusiza sikumema ukuthi ubukele ukurekhodwa kweseshini yeningi.
IGAAPP Academy 2021
Siphinde saxhasa amalungu ethu ngama-webinars we-6 wokwakha amandla abanjwa online masonto onke njalo ngoLwesithathu kusukela ngoSepthemba 15th kuze kube ngu-Okthoba 27. Lezi zikhathi zazihlanganisa izihloko ezahlukahlukene inikezwa ngesiNgisi nangeSpanish. Ungabuka futhi ama-webinars ku- Ikhasi le-GAAPP Academy.
Izihloko zeWebinar zango-2021:
Zonke Izinhlelo Ziya — Ubuchwepheshe Bokusiza Ummeli
Ukwakha Icala Lokuxhaswa Kwezezimali
Buka ama-webinars ethu